Allgedo.com » Madaxweyne Xasan oo ka hadlay Khilaafka soo kala dhex gala Madaxda iyo Saameynta uu ku yeesho Xukuumada.
Madaxweyne Xasan oo ka hadlay Khilaafka soo kala dhex gala Madaxda iyo Saameynta uu ku yeesho Xukuumada.
Madaxaweynaha Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa sheegay in masuuliyiinta ugu sareysa dalka aan wax is qab qabsi iyo qilaaf uusan ka dhexeynin.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in sedexda mas’uul ee ugu sareysa dalka ay saaxibo yihiin islamarkaan ay saxiibo ku yihiin danaha umada soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynaha waxaa uu ka hadlay doorka ay saxaafada ay bulshada kuleedahay waxuuna sheegay iney tahay indhaha iyo dhegaha bulshada soomaaliyeed isgoona sheegay in dowladiisa ay ahmiyad siinayso saxaafada.
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Dowalda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay iney Damaanad qaadi doonaan Ammaanka Saxaafada ayna ka xun yihiin dilalka loo geysanayo waxaa uu saxaafada qaarkeed ku tilmaamay kuwo aanan ka run sheegin xaqiiqada ka jirta dalka iyo dadaalka Dowlada Soomaaliya isagoo uga digay inay iska ilaaliyaan wax weliba oo iska hor keeni kara dadka Soomaaliyeed iyo waxyaabaha wax u dhimaya dalka.
Madaxaweynaha ayaa ka sheegay hadalkan kulan lagu taageeray hormarka siyaasadeed ee uu madaxawynaha kasoo hooyay qaar ka mid ah wadamada caalamka oo ay ugu horeyso aqoonsiga ay aqoonsatay dowlada Mareykanka dowlada Soomaaliya.